Ukuphupha ngomatshini Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Oomatshini bebehleli kangangamakhulu eminyaka. Ziye zaphuhliswa ukukhawulezisa iinkqubo zomsebenzi kunye nokwenza umsebenzi ube lula ebantwini. Oomatshini abalula basebenza ngendlela ye-lever okanye i-rope pullers njenge-pulley; Kwinkulungwane ye-XNUMXth, ukuveliswa kwe-injini yomphunga yayinguvulindlela.
Nangona kunjalo, apho ngaphambili abasebenzi abaninzi bebesadinga ukusebenzisa oomatshini, umsebenzi wabo uya usiba endaweni yoomatshini. Oomatshini abaninzi abasafuni nokusebenza kwabantu. Bahamba kuphela ngokutyhala iqhosha okanye, nokuba kulula, ukude ngeapp.
Umzi mveliso awunakucingelwa ngaphandle kokusebenzisa oomatshini. Ubunjineli boomatshini kunye nophuhliso sisonka kunye nebhotolo yeenjineli, iingcali kunye noomatshini. Inkqubela phambili yobugcisa iyakhawuleza. Ngokukhawuleza nje ukuba iteknoloji entsha isemarikeni, kungekudala emva kokuba ithathelwe indawo yinto ebhetele nangakumbi. Oku kuhlala kushiya abantu bezibuza ukuba ngaba le yokugqibela ihlala iyeyona ilungileyo okanye ukuba uninzi lwezinto ezongezelelweyo kunye neempawu ezizodwa zivumela umntu ukuba abone eyona njongo yomatshini.
Kukho iindidi ezingenakubalwa zoomatshini. Ngokunjalo, kunokubakho iimeko zamaphupha ezahlukileyo kakhulu apho umatshini ubonakala njengophawu lwephupha.
1 Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ephupheni imalunga noomatshini abatsha ngokupheleleyo, oku kuthembisa ukuphupha ngokoluvo ngokubanzi. phu melelanangona kunjalo, engenakufezekiswa ngaphandle kokusebenza nzima. Ngenxa yoko, oku kunokuthetha ukuba nenzuzo kodwa kunye noxinzelelo lwexesha elizayo.
Ukuba umatshini uyinxalenye yokusebenza kwemizi-mveliso njengophawu lwephupha, umzekelo kwilayini yendibano, ubomi balo mntu kuthethwa ngaye bunokuba malunga neprojekthi ebalulekileyo, aza kuyiphumeza ngempumelelo. Uhlalutyo lwamaphupha luvavanya ngokuqinisekileyo la mava ephupha ngokubhekisele kwindlela yokuphila yamaphupha kamva.
Ukuba uqhuba umatshini ngokwakho, kufuneka ulungele ukubandakanyeka kumcimbi onzima. Oku kufuna okuninzi emaphupheni kwaye kufuna ingqalelo yakho epheleleyo. Atención Kuyimfuneko ukuba umatshini uba sisiphithiphithi kuba uyabambeka kwaye wenzakale. Amaxesha amabi ahlala apha kwicandelo lendibaniselwano.
Inokuqondwa njengophawu lwesilumkiso xa umatshini wephupha unemposiso. Ukuphupha kukhokelela umntu kwi ubomi obungalawulwaInesiphumo esiphazamisayo kwiindawo ezininzi zobomi bakho. Ke ngoko, kuya kufuneka uzame ukuphelisa zonke izinto ezichaphazela kakubi isingqi sobomi obunempilo.
Umbono womatshini wokucheba ingca ephupheni unokuqondwa njengophawu lweenguqu ezintle kubomi balowo uphuphayo.
Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolikwa kwengqondo
Umfanekiso wephupha "lomatshini" eliqulathwe kutoliko lwengqondo ngephupha. Iingxabano kwindawo yengqondo. Ke ngoko, xa ulele kubalulekile ukukhumbula iinkcukacha, ezinje ngohlobo lomatshini ngqo okanye imeko yalo. Oomatshini abajonga ngokungaqhelekanga kufuneka bahlale beqondwa njengesilumkiso. Ukuphupha kuxhomeke kakhulu kwingcinga yakho kwaye kuya kusanda ukuphulukana nokunxulumene nenyani.
Oomatshini abaziwa njengomatshini wokuhlamba bafuzisela imeko yezengqondo inkqubo zokuhlanjululwa lwangaphakathi. Oomatshini abanengxolo nabangalinganiyo, nangona kunjalo, babonisa ukuphazamiseka kwengqondo. Iphupha kufuneka ngokuqinisekileyo lifike ezantsi koku.
Uphawu lwephupha «umatshini» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, umatshini usetyenziswa njengophawu lwe Inkqubo yobomi Itolikiwe